Umkhiqizi Wokubonisa Isikrini E-China 丨 HOT LED
Isibonisi Esincane se-Pixel Pitch LED
Ukufakwa okungaguquki kwe-LED Display
Khanya LED Khombisa
Ukubonisa kwe-Mesh LED
Iphosta LED Khombisa
Inkundla Perimeter LED Khombisa
Isibonisi seDance Floor LED
Umenzi Wokubonisa I-LED EChina
Pro Isiqophi WallUmhlinzeki
IHot Electronics Co, Ltd ibigxile ekwakhiweni nasekukhiqizeni izibonisi ezisezingeni eliphakeme ze-LED iminyaka eyi-18. Sitholakala eShenzhen, isisekelo sokukhiqiza se-LED somhlaba wonke, futhi sijabulela izinzuzo zayo zobuchwepheshe futhi sithuthukisa imikhiqizo ephezulu yokusebenza kwe-LED ukukhonza amakhasimende womhlaba wonke.
Manje, amakhasimende ethu abekhona emhlabeni wonke emazweni angama-180 +. , I-Hot Electronics iwukuba ngumenzi wokukhombisa oholeleke kakhulu eChina futhi idale izinsizakalo ezingcono kumakhasimende womhlaba wonke!
Chofoza lapha ukwazi eminye imininingwane yethu
EPHAKATHI WETHU LED BONISA UCHUNGECHUNGE
Isikrini se-LED esingaphakathi se-P2.6
Isilinganiso sokuvuselela okuphezulu 3840Hz. Kufa amakhabethe wokuphonsa anezikhiya ezingamajika ezi- +/- 15 °. 500mm x 500mm / 500mm x 1000mm iKhabhinethi otpion. Izinga eliphakeme lokuvuselela Ukuqashwa kwe-LED okukhombisa i-P2.6.
I-Flying Drone UHD Pitch Encane Led Dispaly P0.9
I-Pixel Pitch: 0.9 / 1.25 / 1.56 / 1.875 / 2.34mm; Usayizi weKhabhinethi: 600 * 337.5mm; Isisindo esincane nomklamo omncane; I-100% yenkonzo yesondlo yangaphambili iyatholakala; 27 "isilinganiso sesici segolide 16: 9 usayizi wekhabethe;
Sinikezela ngebhizinisi eliqashiswayo lokuqasha ukubonisa imali yakho. Amamodeli aholwayo esiwanikeza amamodeli yi-P3.91, P4.81, P2.97, P2.6, njll., Noma ngabe uphethe ikhonsathi enkulu evulekile noma ingqungquthela enkulu, indawo yethu yokuqasha ingukukhetha kwakho okuhle.
Ukungafihli kwesikrini se-LED
Ukuboniswa okusobala okungabonakali okubizwa nge-glass screen, imvamisa kusetshenziselwa izinxanxathela ezinkulu zezitolo, izakhiwo zesimanje, nezinye izindawo zezentengiselwano ukugxila kuthonya lomkhiqizo, ukuthola izithombe nemiyalezo kumgwaqo omgwaqo.
Ukukhanya kwe-LED okungaguquki
Ukuboniswa okuhleliwe okuhleliwe, kufaka phakathi ukuboniswa okuholwa ngaphakathi okuhleliwe nangaphandle, isibonisi esiholwa ngaphakathi esisebenza ngaphakathi ekamelweni lomhlangano, isiteshi sethelevishini, igumbi lokulawula ezempi, ukukhulekelwa kwesonto, njll. ukukhonjiswa okuhleliwe kwangaphandle kusebenza ku-billboard yezemidlalo, uphawu lokuhamba, enxanxatheleni yezitolo yedolobha, njll.
Iminyaka engu-18 yomlando
Singomunye wabakhiqizi bokuqala be-LED eChina. Sineqembu lobuchwepheshe elithuthukile Ngeminyaka engaphezu kwengu-18 yesipiliyoni sokukhiqiza, Gcina izindinganiso zekhwalithi ephezulu.
Kushibhile futhi kujabulile
Sizinze edolobheni lase-Shenzhen elithuthuke kakhulu, yonke imikhiqizo yethu ye-LED isidlulile izitifiketi ze-CE & RoHS ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yesibonisi ngasinye se-LED. Ngaphezu kwalokho, sinikela ngentengo yokuncintisana kakhulu kuwe.
Izinsizakalo esizinikezayo yilezi
iwaranti yeminyaka emibili.
1/24 ukwesekwa kobuchwepheshe behora.
izingxenye ezisele kanye nemigwaqo ekhokhelwayo yezobuchwepheshe esikhathini eside.
sicela uchofoze ikesi lethu lephrojekthi
Ucingo: +86 189 2647 7587
IHongDa Industrial Zone, iTianXin Road, iShiyan Town, Isifunda saseBao'an, idolobha laseShenzhen, eChina.
Isevisi yamakhasimende eku-inthanethi
Uhlelo lwamakhasimende oluku-inthanethi